संवैधानिक तथा नैतिकताको प्रश्न : "नांगियो कम्युनिट चरित्र, 'जसरी हुन्छ हत्याउँ' भन्ने मान्यता स्थापित " - Demo Khabar
लुम्बिनी प्रदेश घटना
काठमाडौँ, बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देखाएको सत्ताको खेलको चरित्र । अविश्वासको प्रस्ताव आयो, आफू अल्पमतमा परे । आइतबार बिहान नै राजीनामा गरे । केही घण्टामै संसदीय दलको बैठक बस्यो, त्यहीमार्फत नेता निर्वाचित भए । र प्रदेश प्रमुखबाट फेरि प्रहरी । प्रशासन, धर्नामा बसेका बहुमत सांसदलाई लाठो लगाए, धरपकड गरे, निर्वाचन, बहुमत, अल्पमतको संसदीय मान्यता, मर्यादा, बिधि बिधान कुल्चिए, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त लिए ।
यो खेलभित्रका घट्ना विवरण प्रस्तुत गरिरहँदा जो कोहीले बिश्लेषण गर्न सक्छ, राज्य होइन, एउटा गुण्डाहरुको ल्कब जर्वजस्ती कब्जा गरिँदैछ । न त्यहाँ बिधि बिधानले काम गय, न मूल्य मान्यताले काम गर्यो ? न बहुमतले काम गर्यो, न संबिधानले काम गर्यो ? देशको एउटा मुख्यमन्त्री छनोटको काममा देखिएको एउटा पदमा बसेको ब्यत्तिले गरेका हर्कतका दृश्य हुन यी ।
यसो सरसर्ती हेर्दा, हामीले छानेका ब्यत्ति, चरित्र, सिद्धान्त, ब्यवहार, प्रबृति हेर्दा हामीले ब्यहोरको देशको राजनीतिक चरित्रको प्दशृन गर्दछ । हामी कहाँ रहेछौ, हामीले छानेका र हामीमाथि शासन गर्नेहरुको चरित्र देख्दा हामी माथि त पशुपतिनाथको कृपाभन्दा ठूलो अरु केही पाईदैन ।
चतुर्‍याइँपूर्ण खेल त उनले खेले, पद पनि सुरक्षित गरे ,तर सँगसँगै यस्तो खेल संवैधानिक रूपमा कत्तिको उचित हो भन्नेबारे न बुझे, न बुझ्न चाहे, के गर्न हुन्थ्यो, के गर्न हुदैनथ्यो भन्नेतिर छुट्याउन चाहे । यस्तो प्रबृतिले देश कता जान्छ, कस्तो नजीर बस्छ, मैले के गरे, भावी जेनरेशनले कसरी ब्याख्या गर्छ, यो खेल भित्रको पात्र म के हुँ ? भन्ने हेक्का नराख्दा राजनीतिक सचेतना कस्तो रहेछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
जसमा सम्बन्धित संसद्मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुमत प्राप्त सरकार बनेको पहिलो पटकका लागि दुई वर्ष र त्यसपछि हरेक एक वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । संसदीय प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले संसद्मा आएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्छ तर लुम्बिनीमा खेल भयो अर्कै ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले दुई र जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले चार गरी ६ सांसद हटाएकाले ८१ सांसद मात्रै बाँकी छन्, जसमा एक जना सभामुख हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ४१ सांसद रहेको नेकपा एमालेभित्र नेपाल–खनाल समूहका सांसदले प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नासाथ एमालेको बहुमत गुम्ने थियो ।
त्यसैले पोखरेलले प्रदेशसभाको साटो संसदीय दलभित्र बहुमत पुर्‍याउने चतुर्‍याइँ गरे । यस्तोमा आफ्नै संसदीय दलभित्र १९ सांसदसमेत विपक्षमा रहेको भए पनि पोखरेल निर्वाचित हुने र बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्थ्यो । प्रदेशसभामा सोझै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएको भए पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद गुमाउने निश्चितजस्तै थियो ।
संवैधानिक कानुनविद् पूर्णमान शाक्यको विचारमा आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित भएको घटनाक्रम संविधानको भावना र मर्मविपरीत हो । ‘दुई दलको संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर फेरि उही नियुक्ति भएको देखिन्छ । यस्तो पनि ताल हुन्छ रु’ शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘दुई वर्षको लाभ लिइसकेपछि प्रश्न उठ्छ भने कि अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने नभए म बहुमतमा छु भन्न विश्वासको मत लिने हो । संसदीय दलभित्र बहुमत पुर्‍याएर प्रक्रिया छल्ने काम उचित होइन ।’
कानुनबिद् भन्छन, अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसको सामना गर्नु स्वाभाविक संवैधानिक बाटो हुने थियो । ‘उनले जुन दोस्रो बाटो अवलम्बन गरे प्रक्रिया असंवैधानिक र अस्वाभाविक बाटो हो,’ उनले भने, ‘जसविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गएको हो, उसैले राजीनामा दिएपछि किन राजीनामा दिएको भन्न त मिलेन तर राजीनामाको कारण खुल्नुपर्छ । के कारणले राजीनामा दिइयो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’ राजीनामालाई कानुनी दाउपेजको रूपमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक काम नभएको उनको टिप्पणी छ ।
अर्का कानुनबिद थप्छन, यसलाई स्वाभाविक कदम मान्दैनन् । उनको विचारमा जुन प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यसलाई नै निस्तेज बनाउने गरी राजीनामा आयो । ‘प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेमा विषयान्तर गर्न राजीनामा गरेको देखिन्छ, अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नचाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अभ्यास हुने हो भने संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने नै थिएन ।’
कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न पाउने संसद्को अधिकारसमेत संकुचित भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन पनि अविश्वास प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने र त्यहाँबाट निकास हुनुपर्ने कानुनविद् ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यहीं छलफल हुनुपर्नेमा त्यसलाई निस्तेज गरेर संसद् ९प्रदेशसभा० मै छलफल नगरी बाहिरबाट सरकार बनाउनु गलत अभ्यास हो ।’
सोमवार, बैशाख २० २०७८०९:४७:३०
नेपालको पत्र ओलीलाई : "पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव, नभए राजीनामा"